I-china soft isikhumba-friendly round sponge makeup loose powder puff Manufacturer and Supplier | UDongmei
Isikhunta esithambile esikhumba isikhumba esiphundu
Okusetshenziswayo: Impuphu yempuphu yenziwa ngesiponji esimnandi, umuzwa othambile kakhulu futhi opholile, ungathatha futhi ubambe inani elifanele lempuphu evulekile, i-shading powder, kanye ne-powder yomzimba kahle, kulula ukuyisebenzisa ngokulinganayo, ungabe usachitha powder wakho.
Idizayini: Ukudonsa umzimba okukhulu kuklanyelwe ukuvumela ukuphatha okulula nokugcina, ukwakheka kosayizi omkhulu kungenza ukuhlanganisa impuphu esikhunjeni kusheshe futhi kube lula.
Isicelo: Ukukhuhla impuphu ye-Fluffy kungasetshenziswa ezinganeni nobuso bomuntu omdala & nomzimba, noma yiluphi uhlobo lwesikhumba, uwoyela, okuphelele, okomile, ngeke kucasule noma kuklwebhe isikhumba sakho, kuhle ukufaka impuphu yomzimba ezinganeni, okugeza kalula ukusetshenziswa okuqhubekayo.
I-Softer and cushiony: Yenziwe ngesiponji se-velor ne-cushiony, umuzwa othambile kakhulu no-fluffy, ingathatha futhi ibambe inani elifanele le-powder evulekile, i-shading powder, ne-powder yomzimba kahle, kulula ukuyisebenzisa ngokulinganayo, ungabe usachitha powder wakho.
Ukubukeka okungenamthungo futhi okuhle: I-Dongshen powder puff inokubukeka okunethezeka okunikezela ngokungagudluki kumkhiqizo ngaphandle kokuphazamisa ukwakheka ngaphansi, futhi akunazinkathazo zokuthi i-velours izophuma.
Isikhumba esihle esibucayi: Lokhu kukhipha impuphu kungasetshenziselwa noma yiluphi uhlobo lwesikhumba, uwoyela, okuphelele, okomile; ngeke zicasule noma ziklwebhe isikhumba sakho, kuhle ukufaka impuphu yomzimba ezinganeni.
Ilungele ukusetshenziswa kohambo nokusetshenziswa kwekhaya futhi kulula ukusebenza ngesandla esisodwa kwazise ibhande le-ribbon eliqinile ngemuva.
Ithambile kakhulu futhi imnene ukufaka isicelo ngemuva kokugeza.Sebenzisa le ntuthu yengane kuzonciphisa i-baby powder emoyeni.
Kulula ukufaka i-powder yomzimba ngokulinganayo esikhunjeni.
Ingakhonza kokubili izingane kanye nabantu abadala.
Kulula ukuyigeza nokuyomisa: Kugezwa ngomshini, vele ukujikijele esikhwameni sokuwasha kumshini wokuwasha, noma ukugeza izandla ngensipho; hang endaweni yomoya ongenisa umoya ukuze uyome, akulula ukukhubazeka ngokuwasha okujwayelekile.
QAPHELA! Njengoba umbala omhlophe omsulwa, okulula ukuwudaya nezinye izingubo, Sicela uhlukane nezingubo zemibala emnyama.
Langaphambilini I-Dongshen emise okwenziwe ngomhlanga isisekelo sesicelo se-makeup sponge blender
Olandelayo: Usizo lobungcweti olwenziwe ngobungcweti nomoya ophefumulayo ukuze kusetshenziswe isisekelo
Usizo lobungcweti oluthambile noluphefumula kalula ...
I-Eco-friendly elastic soft-friendly makeup ...
Ithuluzi Brushes Brushes, Yenza amabhulashi, Ukushefa Setha, Setha i-Makeup Brushes, Ukugunda Izinwele, isethi yokwenza ibhulashi,